ယူကေတွင် ပညာသင်ကြားလိုပါလား? | British Council
ယူကေ တက္ကသိုလ်(သို့)ကောလိပ်(သို့)ကျောင်း(သို့) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစင်တာတစ်ခုခု၌ ပညာသင်ကြားလိုပါသလား။
ယူကေတွင် ပညာသင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပညာရေး၊ နိုင်ငံတကာကအလေးထားသော အရည်အချင်းများနှင့် ထူးကဲ သောသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းအလားအလာများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
Education UK ၏ ဝက်ဆိုဒ် ပေါ်တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ယူကေ ပညာတော်သင်ဆုများနှင့် သင်တန်းများကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် သင်တန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ခရီးစဉ် စီစဉ်ခြင်းမှစ၍ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းနှင့် ရာသီဥတုကို ကျင့်သားရခြင်း၌ အဆုံးရှိသည့် ယူကေတွင် ပညာသင်ကြားရာ၍ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကြံပြုချက်များကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Facebook ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။
ဘာကြောင့် ယူကေ ပညာရေးကိုရွေးချယ်တာပါလဲ?
အောက်ပါ အချက်များကို သင်သိပါရဲ့လား
ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးတက္ကသိုလ် (၆) ခုအနက် (၄) ခုသည် (World Rankings, QS) ယူကေ ၌ ရှိနေကြောင်း
ယူကေသည် သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘာကို ဦးဆောင်နေသော နိုင်ငံတစ်ခု (International Comparative Performance of the UK Research Base, BIS) ဖြစ်ကြောင်း၊
ယူကေသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူရာ၌ ရေပန်းအစားဆုံးသော ခရီးပန်းတိုင်ဖြစ်ကြောင်း၊
ယူကေ ပညာရေးကို သင်ယူခဲ့သော နိုင်ငံတကာဘွဲ့ရများသည် မိမိတိုင်းပြည်၌ ပညာသင်ကြားခဲ့ရခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သိသာထင်ရှားများပြားသည့် လစာများရရှိကြကြောင်း၊
ယူကေ ပညာရေးသည် သင်၏ပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို တိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်အားပေးမှု၊ လွတ်လပ်စွာ တီထွင်ကြံဆနိုင်မှု၊ သင့်အနေဖြင့် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်အောင် ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို ပေးနိုင်ပါသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသော ယူကေ သင်တန်းတစ်ခုကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွင် အောင်မြင်မှုရရှိစေမည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများကို ရရှိနိုင်မည့် ယူကေ၏ စာသင်ခန်းပြင်ပ အချိန်များတွင်လည်း တစ်မူခြားနားသော ကျေးလက်ဒေသများ၊ မြို့ကြီးများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကို ခံစားနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယူကေ ပညာရေးကို ရွေးချယ်ရန် နောက်ထပ်အကြောင်းများကိုရှာပါ။
ယူကေ တွင်းရှိ ပညာသင်ယူရာတွင် ရွေးချယ်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများ
ယူကေ ပညာတော်သင်ဆု(သို့)သင်တန်းတစ်ခုခုကို ရှာဖွေလိုပါသလား? ဘာကိုဘယ်မှာလေ့လာသင့်တယ် ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် အကူအညီလိုပါသလား? အကူအညီပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေပါသည်။
ယူကေတွင် ပို့ချလျက်ရှိသော ထောင်ပေါင်းများစွာသော သင်တန်းများနှင့် ပညာတော်သင်ဆုများကို Education UK ဝက်ဆိုဒ် ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှာဖွေရေးကိရိယာများနှင့် အမှီအငြမ်းများကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘွဲ့ကြို Bachelor ဘွဲ့များ၊ HNDs များနှင့် ဘွဲ့လွန် Master ဘွဲ့များ၊ MBAs များနှင့် ပါရဂူဘွဲ့ အစရှိသော ပညာအရည်အချင်းများကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ အကြောင်းကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ငယ်ရွယ်သော ကျောင်းသားများဖြစ်သော ကလေးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစားနေ၍ ရသော ကျောင်းများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကိုပါ ရှာကြည့်လို့ရနိုင်ပါသည်။
သင်ယူမှုရွေးချယ်ခွင့်များတွင် England, Northern Ireland, Scotland နှင့် Wales ရှိ သင်တန်း အမျိုးအစားများ၊ အရည်အချင်းများ ကွဲပြားသော ပညာရေးစနစ်များအကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သင် ယူကေသို့ မသွားမီ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သော အကြံပြုချက်များ
သင့်အနေဖြင့် ယူကေမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ အစီအစဉ်ပြုလုပ်နေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့က အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။ ယူကေ နှင့် သက်ဆိုင်သော ဗီဇာများ၊ ပညာတော်သင်ဆုများ၊ ငွေကြေး၊ နေရာထိုင်ခင်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ခရီးသွားခြင်း အစရှိသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သော လက်တွေ့အသုံးကျသည့် အကြံပြုချက် များကို စုစည်းပေးထားပါသည်။
လက်တွေ့အသုံးကျသော အကြံပြုချက်များ ရနိုင်ရန်အတွက် Education UK ဝက်ဆိုဒ်ကို မသွားမီ အရင်ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
ယူကေတွင် နေထိုင်ခြင်းနှင့် ပညာသင်ယူခြင်း
ယူကေတွင် နေထိုင်ပြီး ပညာသင်ကြားခြင်းသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဘယ်လိုနေပါသလဲ?
ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ ညပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှ အစ စားစရာ၊ သောက်စရာ၊ ဘာသာရေးနှင့် ရာသီဥတုတို့ပါဝင်သော ယူကေတွင် နေထိုင်ပြီး စာသင်ကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများအကြောင်းကို Education UK website တွင် စုံစမ်းရှာဖွေကြည့်ပါ။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများက ရေးထားသော blog များ နှင့် ၎င်းတို့မှ ပြောသော အတွေ့အကြုံများပါဝင်သည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များကိုလည်း ဖတ်နိုင်ပါသည်။
ယူကေသင်တန်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျောင်းလျှောက်ခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်
ယူကေ၏ မြို့များ၊ နယ်များနှင့် ဓလေ့များကို လေ့လာပါ
သင်၏ ယူကေအတွေ့အကြုံများအတွက် အသင့်ပြင်ထားပါ